सुभाष दर्नाल अवार्डमा अमेरिकी प्रजातान्त्रिक अभियन्तादेखि भारतीय प्रोफेसरसम्म « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » सुभाष दर्नाल अवार्डमा अमेरिकी प्रजातान्त्रिक अभियन्तादेखि भारतीय प्रोफेसरसम्म
सुभाष दर्नाल अवार्डमा अमेरिकी प्रजातान्त्रिक अभियन्तादेखि भारतीय प्रोफेसरसम्म
राजधानीमा एक विशाल समारोहबीच सक्षाराम चमारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको ‘सुभाष दर्नाल अवार्ड’ प्रदान गरिएको छ । पाँच लाख राशीको उक्त अवार्ड कपिलबस्तुका रक्षारामले दलित समुदायको सामाजिक न्याय र शिक्षा क्षेत्रमा दिएको योगदानस्वरुप प्रदान गरिएको हो ।
विभिन्न क्षेत्रमा योगदन पु¥याएका ५५ जनामध्येबाट चमार अवार्डका लागि छानिएका हुन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र विषयक बहस कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त वहसको सहजिकरण अमेरिकास्थित न्यू स्कुल विश्वविद्यालय अन्तरगत इन्डिया चाइना इन्सीच्युटका निर्देशक डा. अशोक गुरुङले गरेका थिए । बहसमा अमेरिकी प्रजातान्त्रिक अभियन्तादेखि भारतीय प्रोफेसरहरुले दलितको विषयमा गहकिलो तर्क पेस गरेका छन् । उनीहरुले दिएको भाषणको सम्पादित अंशः
ल्यारी डाइमण्ड, पोलिटिकल सोसियोलोजिस्ट, अमेरिका
अहिले पनि छुवाछुत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यतिसम्मकी छुवाछुत व्यवस्था हट्यो भने भगवान रिसाउँछन् भन्ने मान्यता राख्छन् । यसो हो भने त भगवानलाई पनि छुवाछुत र लोकतन्त्र बारे तालिम दिनुपर्ने भयो ।
कार्लस् ग्रेसमेन्ट, प्रेसिडेण्ड, एनइडि, अमेरिका
दर्नालको जीवनमा आधारित रहेर तयार पारिएको डकुमेन्ट्रिले मलाई भावुक बनायो । मैले दर्नाललाई सन् २०११ मा भेटेको थिए । त्यतबेला उहाँले नेपालको दलित आन्दोलनबारे १० मिनेट बोलेका थिए । अहिले पनि मलाई झल्झली त्यो आद आइरहेका छ ।
नेपालमाथि विश्वले ध्यान राखेको छ । नेपाल विविधतायुक्त सुन्दर देश हो । यदि विभेदपूर्ण समस्यालाई समाधन गर्न सकेमा नेपाल जस्तो राम्रो मुलुक अर्को बन्दैन । अन्यायमा परेका नेपालीलाई कसरी न्याय दिलाउँन सकिन्छ भनेर सोँच्नुपर्दछ । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित भयो भने राम्रो हुन्छ । सुभाष पनि यसैको अभियानमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँबाट म निकै प्रभावित भएको थिएँ ।
सामाजिक न्याय भनेको निकै महत्वपुर्ण विषय हो । सामाजिक न्याय भएन भने दिगो आर्थिक बिकास सम्भव छैन । त्यसैले सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउँनुको विकल्प छैन ।
सुखदेउ थोरेट, चेयरमेन, इन्डियन काउन्सिल सोसल साइन्स रिसर्च, भारत
छुवाछुतलाई परम्परा र धर्मको लगाम लगाएर झंग्याइएको छ । किनकी असमतामा नै उपल्लो मान्छेको स्वार्थ लुकेको हुन्छ । छुवाछुतमै उनीहरुको सम्मान लुकेको हुन्छ । कतै हामी सबै समान हुन्छौ र हाम्रो सम्मान गुम्छ की भन्ने उनीहरुलाई डर छ । उनीहरु समानता चाहादैनन् । त्यसैले समाज र लोकतन्त्रको लागि अझै लड्नु जरुरी छ ।
पदम सुन्दास, अध्यक्ष, समता फाउण्डेसन, नेपाल
सुभाष दर्नाल समग्र नेपाली दलित युवाहरुको आशाका केन्द्र हुन् । नेपालका १२ लाख दलित युवाहरुको सपना हुन् । सुभाषले छाडेर गएका सपनाहरुलाई पुरा गर्नको लागि हामी यो अवार्ड प्रथान गर्न शुरु गरेका हौँ । यो अवार्डले पक्कै पनि यो समुदायमा काम गर्नेहरुका लागि प्रोत्साहान गर्छ भन्ने लाग्छ । र, युवाहरु थप ससक्त हुन्छन् ।
दुलारी हरिजनः सांसद, नेपाल
नेपालमा अहिले पनि विभेदको मुद्दा जटिल छ । म त मधेशवाट आएको मान्छे । त्यहाँ झन ठूलो समस्या छ । दलितहरु वलत्कृत भएर बस्नु परेको छ । आर्थिक, शैक्षिक रुपमा पछाडि छन् ।
नीतिगत रुपमा यसको समाधान हुन सकेन भने केही हुँदैन । अहिले पनि हरेक क्षेत्रमा दलितलाई अवसरबाट वञ्चित बनाइएको छ । राजनीतिक दलहरुले चुनावको बेलामा मात्र दलितहरुलाई आश्वासन देखाउँछन् । अनि सफल भइसकेपछि त्यो समुदायलाई नहेर्ने प्रचलन बढ्ता छ ।
सरिता परियार, संयोजक सरिता परियार ट्रस्ट फण्ड
सुभाष जागरण मिडियाको अध्यक्ष भएकाले मैले उहाँसँग विवाह गरेको होइन । मान्छेलाई बिचार, सिद्धान्त र दर्शनले नजिक बनाउँछ । हाम्रो विचार एक भएपछि हामी एक भएका हौँ । त्योभन्दा ठूलो अरु केही अपेक्षा होइन । नेपालीहरुले विवाहपछि नारीको स्वतन्त्रताको ढोका बन्द भयो भन्छन् । तर, म त बिबाहपछि स्वतन्त्र बनेँ ।
जहाँसम्म नेपालमा छुवाछुत प्रथा छ, यो तपाई हामी, सरकार, पत्रकार या भनौ सबैको गर्भमा छ । जसले पौरख गर्न कहिल्यै संकोच मानेन उसलाई नै अछुत बनाइयो । हामीले छुवाछुत प्रथा भोगिरहेका छौँ, तर, यो कुनै युनिभर्सीटिमा पढाइने विषय होइन । तर पनि किन भोग्न बाध्य छौँ ?
आज पनि तपाई हामी सबैले विभेद भोगिरहेका छौँ । समय केही परिवर्तन भए पनि वास्तविक परिवर्तनको अभाष गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले यसलाई दलितहरुको मात्र नभनि सबैको समस्याको रुपमा ग्रहण गरेर समाधानतर्फ जानुपर्दछ । मलाई आसा छ युवपुस्ताले यसमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिन्छ र दिनुपर्दछ । सुभाषको जीवनबाट अहिलेका युवाहरु पनि सिक्न जरुरी छ ।
रक्षाराम चमार, अवार्ड विजेता
सर्वप्रथम म दलित आन्दोलनका अविष्मरणीय योद्धा स्वर्गीय श्री सुभाष दर्नालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यो सामाजिक न्यायका लागि दर्नाल एवार्ड सहर्ष स्वीकार गर्दछु । मलाई यो सम्मानित पुरस्कारको लागि योग्य ठहर गरेकोमा दर्नाल एवार्ड समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु । म यस एवार्डलाई सम्पूर्ण दलित समुदायप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु । आजको यो क्षणमा म अरुको घरखेतमा हलि बसेर भएपनि मलाई पढ्न र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सधैं उत्प्ररित गर्नुहुने मेरा बुवालाई हृदयदेखि नै धन्यवादन दिन्छु । उहाँहले सामाजिक उत्थान, विभेद विरुद्धको हरेक कार्यलाई सहयोग र समर्थन गर्नु भयो । यो विशेष क्षणमा मलाई डाहोे¥याएर यहाँसम्म आउनका लागि अभिभावकत्व प्रदान गर्ने थर्ड एलायन्स र यसका पुर्व अध्यक्ष अधिवक्ता दिपेन्द्र झालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छ । स्वर्गीय सुभाष दर्नाल ज्युले छुवाछुतविरुद्ध गरेको कार्य सह्राहनीय छ । उहाँको लक्ष्य पूरा गर्नमा समेत आफूलाई पूर्ण रुपमा समर्पित गर्नेछु । नेपालमा विद्यमान असमानता, विभेद, छुवाछुत लगायतका कुरिती तथा कुसंगतिहरु हटाउन उहाँले सानै उमेरमा गरेको योगदान आम सामाजिक न्यायका अभियन्ताहरुका लागि प्रेरणाको स्रोत पनि हो । नेपालको दलित आन्दोलनमा अहिले पनि धेरै खाडलहरु रहेका छन् । दलित भित्रको विभेद, एकअर्का बिच सहअस्तित्वको अभाव, मधेसी दलित र महिलालाई समग्र राज्यले गरेको विभेद रहँदासम्म सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यो पुरस्कारले यस कार्यमा मलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ । दलित आन्दोलनको अन्तिम लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति सम्मान र स्वाभिमानसाथ बाँच्न पाउनु नै हो । तसर्थ मैले यस कार्यलाई तराइ मधेशमा रहेका दलित युवाहरुलाई गोलबन्द गरी प्राज्ञिक बहसमार्फत् समग्र दलित आन्दोलनलाई अझ सशक्त तथा अलग तरिकाले लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छौ । यस कार्यमा यहाँको सहयोग, सहकार्य र सल्लाहको अपेक्षा समेत गर्दछाँै । यो अवार्डको केही राशी सामाजिक न्याय र समताको लागि दलित युवाहरुलाई “कानुन अध्ययनमा” समेत सहयोग गर्ने योजना बनाएको छु । यसका लागि तपाइँका सहयोगी हातहरुको अपेक्षा गर्दछु । जातीय विभेद, छुवाछुत, असमावेशी, असमानताका विरुद्ध सदैव अदालतको ढोका ढक्ढकाउने मेरो जिवन प्रयन्त अभियान हुनेछ ।
← रक्षाराम हरिजनलाई सामाजिक न्यायका लागि दर्नाल अवार्ड	दर्नाल अवार्ड रक्षाराम चमारलाई →